‘देखेको सपनामा बाँच्न पाएको छु’ - Kohalpur Trends
‘देखेको सपनामा बाँच्न पाएको छु’
काठमाडौं । पुष्प खड्का न ‘चकलेटी’ अभिनेता हुन् न त ‘खस्रा’ । यी दुवै स्वरुपमा नदेखिने उनी नृत्यमा अब्बल मानिन्छन् । म्युजिक भिडियोमा निकै देखिएका यी अभिनेताको चलचित्रतिरको छलाङ लोभलाग्दो छ ।
‘नृत्य राम्रो गर्ने अभिनेता’ का रूपमा चिनिएका पुष्प अभिनयका कारण पनि दर्शकमाझ प्रिय बन्दै छन् ।
चलचित्र ‘अझै पनि’ मा सहायक भूमिका निर्वाह गर्दै चलचित्रमा डेब्यू गरेका पुष्पले ‘दर्पण छायाँ-२’ मा मुख्य भूमिका पाए ।
त्यसयता ‘मंगलम’, ‘दात भात तरकारी’, ‘मारुनी’ चलचित्रमा काम गरिसके ।
उनले ‘तिम्रो मेरो साथ’, ‘कृष्णलीला’ को भर्खरै छायांकन सकेका छन् । ‘कृष्णलीला’ चैत २७ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ ।
आखिर पुष्पले चलचित्रमा कसरी छलाङ मारे ? उनको पृष्ठभूमि के हो ? अनलाइनखबरको जिज्ञासामा पुष्पले भने, ‘म सानो-सानो काम गर्दै अगाडि बढेको हुँ । म्युजिक भिडियो, चलचित्र दुवैमा पाइला राख्नुअघि मैले धेरै संघर्ष गरेको छु ।’
निद्रामा पुष्पले कैयौं सपना देखे । उनलाई ती तमाम सपना सम्झना छैनन् । तर, जागृत अवस्थामा उनले एउटै सपना देखे – चलचित्र खेल्ने, चलचित्रको ‘हिरो’ बन्ने ।
सानैदेखि त्यही सपनाको बाटो पछ्याउँदै पुष्पले संघर्ष गरे ।
पुष्पलाई म्युजिक भिडियो र चलचित्रमा ब्रेक दिएका आलोकश्रीको निधन भयो । जसले पुष्पलाई लामो समयसम्म राम्रोसँग निदाउन दिएन ।
‘उहाँ मेरो कला क्षेत्रको अभिभावक नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँका कारण म्युजिक भिडियोमा काम पाइरहेको थिएँ । सहज भइरहेको थियो । उहाँको निधनपछि धेरै गाह्रो भएको थियो’, पुष्प सुनाउँछन् ।
सोही गीतको माध्यमबाट पुष्पले चलचित्र ‘दर्पण छायाँ-२’ मा मुख्य अभिनेताका रूपमा काम गर्ने अवसर पाए ।
चलचित्र निर्देशक तुलसी घिमिरेले सो गीतको भिडियो हेरे । ‘दर्पण छायाँ-२’ बनाउने तयारी गरिरहेका निर्देशक तुलसीले गायक शिव परियारलाई भनेछन्, ‘तपाईंको गीतको मोडललाई चलचित्रमा खेलाउनुपर्‍यो ।’
त्यसअघि पनि पुष्पका म्युजिक भिडियो हेरेर धेरै निर्माता-निर्देशकले भेट्न बोलाएका थिए । उनलाई तुलसीले आफ्नो चलचित्रमा खेलाउने कुरामा विश्वास लागेन ।
र पनि पुष्प तुलसीलाई भेट्न गए । तुलसीले आश्वासन दिएनन्, उनलाई चलचित्रको मुख्य भूमिकामा लिए । पुष्पले ‘दर्पण छायाँ-२’ मा मुख्य हिरोको भूमिकामा अभिनय गरे ।
पुष्पले अहिलेसम्म एक हजार हाराहारी म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेका छन् । दर्जनौं चलचित्रमा । भन्छन्, ‘देखेको सपनामा बाँच्न पाउँदा को खुशी हुँदैन होला र ?’
‘दर्पण छायाँ-२’ प्रदर्शन नहुँदै पुष्पले छविराज ओझाको चलचित्र ‘मंगलम’को साइन सकिसकेका थिए ।
उनले सोचेकै भयो । चलचित्रले राम्रो व्यापार गर्‍यो । उनको कामको तारिफ भयो । यही चलचित्रबाट पुष्पले उत्कृष्ट नायकको राष्ट्रिय अवार्ड समेत पाए ।
यो चलचित्रले नै उनलाई अभिनयको प्रस्ताव आउने वातावरण बनाइदियो । त्यसयता उनका ‘दात भात तरकारी’, ‘मारुनी’ प्रदर्शनमा आए ।
लकडाउनपछि पुष्प ‘तिम्रो मेरो साथ’, ‘कृष्णलीला’ को छायांकन सकेर बसेका छन् । यी दुवै चलचित्र पोष्ट प्रोडक्सनको क्रममा छन् । ‘कृष्णलीला’ चैत २७ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ ।
पुष्प मुकुन्द भट्टको निर्देशनमा बन्ने नयाँ चलचित्रमा अभिनयको तयारीमा छन् । पुष्पले अहिलेसम्म एक हजार हाराहारीमा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेका छन् । दर्जनौं चलचित्रमा । भन्छन्, ‘देखेको सपनामा बाँच्न पाउँदा को खुशी हुँदैन होला र ?’
तस्वीरहरू : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर
Previous Previous post: प्रमोद प्रधान : दुब्लो कायाका बलशाली कवि
Next Next post: एन्फा प्रेसिडेन्ट कप : स्टार सिटी एक खेल लगावै च्याम्पियन